Ganacsade lagu dilay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGanacsade lagu dilay magaalada Boosaaso
December 13, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Nin ganacsade ah ayaa saakay oo Khamiis ah lagu dilay magaalada Boosaaso, sida ay warsidaha Puntland Mirror u sheegeen ilo-wareedyo katirsan dadka deegaanka.
Ganacsadaha ayaa waxaa toogtay niman aan la garanayn haybtooda oo baastoolado ku hubeysnaa xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga.
Ganacsadaha la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdulqaadir Maxamed Saleebaan. Waxaa sidoo kale weerarkaas ku dhaawacmay aabihiis Maxamed Saleebaan oo la joogay markii dilku dhacayay.
Waa weerarkii ugu dambeeyay bartilmaameedyo taxane ah oo ka dhan ah ganacsatada ku sugan xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Nimankii dilka geystay ayaa ka baxsaday koobta, sida ay ilo-wareedku sheegeen.